Korneyl Caarre, Somaliland: “Hubka waxaan u qaatay in aan suuliyo dulmiga iyo caddaalad-darrada Somaliland” (dhegayso) – Radio Daljir
Korneyl Caarre, Somaliland: “Hubka waxaan u qaatay in aan suuliyo dulmiga iyo caddaalad-darrada Somaliland” (dhegayso)
Agoosto 20, 2018 10:26 g 0
Korneyl Caarre oo ah hoggaamiyihii ugu horreeyey ee mucaarad hubaysan kaga horyimaada maamulka Somaliland, tan iyo dhidbiddii maamulka, asaga oo gacan ka helaya dowladda Puntland, ayaa maanta warbaahinta kula hadlay saldhigga cusub ee ciidamada hubeysan ee uu hoggaaminayo ay ku yeesheen aagga Qardho.
Korneyl Caarre oo hadaladiisa ay ka muuqdaan caro raagtay ayaa ku dheeraaday waxa ku kallifay in uu mucaarad hubeysan kaga horyimaado Somaliland, waxa uuna yiri, “waxaan go’aansaday in aan saldhigga Puntland dhisto si aan u suuliyo dulmiga … waxaan ahaa Korneyl sare oo ciidamada qaranka, xataa al-aana waxaan ahay Somaliland. Waxaan se suulinayaa sida rasmiga ah haddii aan idiin sheego caddaalad-darrada iyo dulmiga.”
Korneyl Caarre oo sii wada meesha dulmiga ka taagan Somaliland uu gaaray ayaa yiri, “waxaan soo taagnahay agoomo u dhintay dalka, xaq u leh, xuquuq ku leh … waxaan arkay laba agoon oo iska soo horjeeda oo midna xuquuqda qaadanayo midna aanu qaadan … dhanka dowladda waxaad arkeysaa faamili 15 sarkaal leh oo ku oraneysa shir baanu leenahay ee na sug, waa faamili.”
Dhanka Madaxweynaha iyo caddaalad-darrada waxa uu Korneyl Caarre yiri, “markaad eegto madaxweynaha, janaraalka ciidanka, maxkamada sare, fulinta, wuxuba waa isku reer. wuxuba wa isku reer … waxaad arkeysaa dhiijiyo isku mid ah … taliye sadhig illaa isuduwe cid kaliya laga simayo … Siyaad Barre Alle yaa raxma raaximiin biyaha waa laga dhargi jirey Hargeysa, [hadda] waxaad arkeysaa cid aan cabbeynba oo biyo cabbeyn.”
Korneylka oo ka hadlaya dacdarada haysata ciidamada qaranka ee ku dulman aagga u dhexeeya Laascaanood iyo Tukaraq, waxa uu yiri, “ciidamada qaranka ee ku dulman meesha la yiraahdo Tukaraq eeriya iyo Laascanood dhexdooda dumarkoodi baa la guursaday waa la ogyahay. Waa la ogyahay waxay ku noolyihiin oo annagaa xogogaal u ah.”
Hoos kaga bogo shirka jaraa’id ee Korneyl Caarre.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20664